30 Mivavaka amin'ny mamatonalina ho an'ny fahatapahana ara-bola | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka 30 Mivavaka amin'ny mamatonalina ho an'ny fahatapahana ara-bola
11 Fa ny masoandro sy ny ampinga ny Tompo Andriamanitra: hanome fahasoavana sy voninahitra ny Tompo; tsy hisy navelany hisy hajanona amin'izay mandeha mahitsy.
The mamatonalina ny ora no fotoana mahomby indrindra hikatsahana ny endrik'Andriamanitra. Tamin'ny misasakalina i Paul sy i Silasy dia nivavaka tao mba hialana amin'ny fanandevozana, Asan'ny Apôstôly 16:25, tamin'ny mamatonalina no namotsorana an'i petera raha nivavaka ny fiangonana, Asan'ny Apôstôly 12: 6-19, Matio 13:25 milaza fa raha matory ny lehilahy , namafy tsimparifary ny fahavalo. Tsy maintsy araraotintsika ny ora sasakalina hivavahana amin'ny tenantsika tsy ho andevo. Androany dia mijery teboka vavaka 30 misasakalina isika mba hahombiazana ara-bola. Tokony ho takatsika fa tena ilaina ny mivavaka ho an'ny fandrosoana ara-bola. Marina fa tsy manankarena ianao amin'ny fivavahana mandritra ny andro fotsiny nefa tsy miasa, fa rehefa mivavaka isika dia mampidina ilay zavatra tsy hita noanoa hanampiana ny ezaka voajanahary ataontsika. Ny vavaka dia mahatonga ny herin 'Andriamanitra hanampy antsika amin'ny fiainantsika ara-bola amin'ny fiainana. Rehefa mivavaka koa isika dia mameno ny fontsika ny fitiavana an'Andriamanitra ka manasarotra ny fiainantsika ny fitiavana vola.
Ity tolakom-bavaka amin'ny misasakalina ity dia hanokatra varavarana ara-bola ho anao, rehefa mivavaka amin'ny finoana ianao, miakatra amin'ny ora mamatonalina dia ho hitanao ny herin'Andriamnitra mitaona hamonjy anao amin'ny asanao. Andriamanitra dia hanao izay raharaham-pitsarana rehetra ataonao mba hambinina, na dia ny tranga tsy ampoizina aza no hampifaly anao. Hanohana anao amin'ny tanany ankavanana ny Tompo ary hanao anao ho lohany amin'ny asanao. Rehefa mivavaka momba izany vavaka izany ianao dia homen'ny Tompo anao hevitra vaovao izay hahatonga anao ho olo-malaza eran'izao tontolo izao ary hampiasa anao hanao ny tontolo ho toerana tsara kokoa. Mino aho anio fa ity vavaka ity dia hitarika amin'ny fahatapahana ara-bola anao amin'ny anaran'i Jesosy.
1. Mandidy ny sakana rehetra amin'ny demonia aho amin'ny famitahana ara-bola ahy, mba ho afaka tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Avelao haringana daholo ny kaonty demony rehetra, ary ny baiko rehetra omeko ny famoahana ny volako rehetra !!!, amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Hamatorako ny lehilahy matanjaka rehetra mijoro eo anelanelako sy ny fahombiazako ara-bola amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Manana ny fananako rehetra amin'ny tanan'ny fahavalo, amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Izaho dia mivadika sy manala ny tenako amin'ny ozona rehetra momba ny fanandevozana ara-bola sy ny fahantrana, amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Manafaka ny tenako amin'ny fanekena rehetra tsy misy saina sy tsy nahatsiaro tena aho tamin'ny fanahin'ny fahantrana, amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Avelao Andriamanitra hitsangana ary aelezo ny fahavaloko rehetra amin'ny fidiram-bolako,. amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Tompo ô, avereno ny taonako sy ny fiezahana rehetra ary hampiova azy ireo amin'ny fidirako ara-bola amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Avelao ny fanahin'ny fankasitrahana ankasitrahana amiko na aiza na aiza alehako amin'ny anaran'i Jesosy.
10. Ray ô, mangataka aminao aho, amin'ny anaran'i Jesosy, handefa fanahy mpanampy mba hampifandray ahy amin'ireo mpanampy mpanampy ara-bola amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Aoka ny olona hitahy ahy ara-bola na aiza na aiza alehako, amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Namoaka ny fitantanam-bolako tamin'ny tsy fahampian-kanina aho, tamin'ny anaran'i Jesosy.
13. Namaha anjely aho, tamin'ny anaran'i Jesosy mahery, mba handeha hikatsaka famindram-po amin'ny volako.
14. Avelao ny fanakorontanana ara-bola rehetra hitsangana eo amin'ny lalako, amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Nesoriko ny anarako sy ny ankohonako tao amin'ny boky momba ny fatiantoka ara-bola, tamin'ny anaran'i Jesosy.
16. Fanahy Masina, ho mpinamana am-bolako.
17. Ny zava-tsoa rehetra izay mivoaka amin'ny tsy fetezako ara-bola manomboka izao dia manomboka mikoriana ao aminy !!! amin'ny anaran'i Jesosy mahery.
18. Laviko ny fanahin'ny fahafaham-baraka sy mahamenatra ara-bola amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Dada ô, sakano ny lesoka rehetra amin'ny volako, amin'ny anaran'i Jesosy mahery.
20. Avelao ho lasa mafana be ny vola azoko hialana ireo mpangalatra sy ny mpanjifa demony, amin'ny anaran'i Jesosy.
21. Avelao ny hery ara-batana ara-panahy izay mahasarika sy mitazona harena dia ho apetraka amin'ny fitantanam-bolako, amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Namoaka ny fitantanam-bolako tamin'ny fitaomana, fifehezana ary fanjakazakana ny faharatsiana ao an-tokantrano aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
23. Aoka ny anjely satana rehetra hampiala ny fitahiana ahy tsy ho voarindra tanteraka, amin'ny anaran'i Jesosy.
24. Avelao ny vokadratsin'ny vola hafahafa azoko na nokasihina ho tsy miandany amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Tompo ô, ampianaro ahy ny tsiambaratelo momba ny fanambinana.
26. Aoka ny fifalian'ny fahavalo amin'ny fiainako ara-bola hihodina ho amin'ny alahelo, amin'ny anaran'i Jesosy.
27. Avelao ny tsodrano rehetra nentina ho babo tany an-toerana na tany ivelany ho navotsotra ho ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Mamatotra ny hery rehetra manohitra ny fahombiazana aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
29. Aoka ny volako ho mafana loatra ka ny fahefana ratsy hipetraka, amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Ray mankasitraka anao aho noho ny nanaovanao ahy lehilahy / vehivavy manankarena amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratra30 Tantaram-bavaka ho an'ny toe-javatra tsy azo tanterahina
Next lahatsoratraTeboka 30 amin'ny fotoam-bavaka rehetra
Nicola Clarke-Cuffe 7 Novambra 2019 Amin'ny 3:36 hariva
Tohizo ny asa tsara. TAHIN'ANDRIAMANITRA!
Maame Sarpong 18 Novambra 2019 Amin'ny 12:24 maraina
Piet 4 Desambra 2019 Amin'ny 2:30 alina
TANTARA Ry lehilahin'Andriamanitra.
Wung mamono 17 Desambra 2019 Amin'ny 12:27 maraina
Felecia Roques 5 Janoary 2020 Tamin'ny 3:59 maraina
Misaotra betsaka MOG, mahery ny lahateninao rehetra amin'ny vavakinao.
Mariana Cacovean 1 martsa 2020 Amin'ny 1:11 hariva
Mariana Cacovean 1 martsa 2020 Amin'ny 1:14 hariva
Matthew Elesiro 19 martsa 2020 Amin'ny 6:54 hariva
Pamela 1 aprily 2020 Amin'ny 9: 52 hariva
Misaotra betsaka amin'ny vavaka mahery.
Margret van de Laar 7 aprily 2020 Amin'ny 7:49 maraina
Hw gebeden hebben een weerklank op aarde en in de hemel.
Om ve volledige erkentenis der waarheid commentaire.
Veel liefs Margret ???❤️
Ny Pasitera Ikechukwu Chinedum 7 aprily 2020 Amin'ny 7:56 maraina
Andriamanitra zegene je margret
Ogheneovo 27 jona 2020 Amin'ny 11:35 hariva
Salama, Andriamatoa azafady hanampy ahy hivavaka amin'ny fahatapahana ara-bola
kago lucresia 29 Jolay 2020 Amin'ny 9:44 maraina
Misaotra anao amin'ny vavaka mahery vaika mahery. Hanohy ny vavaka aho ho an'ny varavarana misokatra ara-bola amin'ny fiainako izay sahirana ara-bola.
Nadia 11 aprily 2020 Amin'ny 5:25 maraina
Mahery izany ary tena ankasitrahana. Hivavaka amin'ny afak'omaly rehetra aho izao. Hotahian'andriamanitra anie ianao!
Debo Orekoya 23 aprily 2020 Amin'ny 1:22 maraina
Misaotra ny vavaka Pastora. Nitahy ny fiainako io.
Cynthia 26 aprily 2020 Amin'ny 4: 28 hariva
Misy fomba fampidinana vavaka ve? Tena voatahy aho tamin'ny vavaka nataonao 💞
chibueze evarlistus ogbonnaya 7 Mey 2020 Amin'ny 7:40 maraina
Ity vavaka izay nolazaiko izao dia tokony hanokatra varavarana ankasitrahana ara-bola ho ahy ary koa ity vavaka ity dia hahatonga ahy hifindra avy amin'ny Voninahitra ho any Voninahitra ao amin'i Jesosy anarana Amen
chibueze evarlistus ogbonnaya 8 Mey 2020 Amin'ny 9:21 hariva
Ity vavaka izay nolazaiko izao dia tokony hanova ny tantarako tsy ho ela amin'ny anaran'i Jesosy hoe Amen
Henry kelechi 11 Mey 2020 Amin'ny 11:42 hariva
Mihodina ny zava-drehetra mba ho soa amin'ny anaran'i Jesosy amena.
Godwin 15 Mey 2020 Amin'ny 1:36 maraina
Hevitra: Misaotra Tompoko, Hotahina aho! Mino ny vavahady ara-bola mino aho fa misokatra izao! Amin'ny anaran'i Jesosy
SONIA CADENA BUENO 16 Mey 2020 Amin'ny 5:33 hariva
Oluwakemi Abimbola 19 Mey 2020 Amin'ny 2:50 maraina
Oay ! Mahery be izany ary notahina sy ankasitrahana amin'ireto vavaka ireto. Ny zava-drehetra dia miasa manodidina ny tsara ho ahy manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy, Amen.Misaotra betsaka amin'ny vavaka.
Oluwakemi Abimbola 19 Mey 2020 Amin'ny 3:03 maraina
Oay! Nomena fitahiana be dia be aho noho ireo vavaka ireo. Ny zava-drehetra dia natao ho an'ny tiako indrindra amin'ny anaran'i Jesosy, Amena. Misaotra an'olombelona an'Andriamanitra.
Cola 24 Mey 2020 Amin'ny 5:55 hariva
Tiako ireo hevitra momba ny vavaka ity
Idoko mercillina Jiona 17, 2020 Ao amin'ny 10: 04 am
Misaotra betsaka tompoko, enga anie Andriamanitra hitandrina ny tanjakao ao aminy.ifa hanao vavaka, ary minoa efa nivoha sahady ny varavarana ara-bola
Alimi Samuel Abiodun Jiona 24, 2020 Ao amin'ny 2: 30 am
Samy tahian'Andriamanitra ianao tompoko.
Austin chomba 30 jona 2020 Amin'ny 8:22 hariva
veloma, lehilahin'Andriamanitra dia mivavaka ho ahy amin'ny fahatapahana ara-bola avy any Zambia
Solomon P 22 aogositra 2020 Amin'ny 3:13 hariva
Andriamanitra malala aho azafady mba ampio aho fa sahirana be amin'ny fiainako noho ny trosa mitentina 3lakhs azafady mba ampio aho Andriamanitra.
Maggie Vuma 24 aogositra 2020 Amin'ny 7:30 maraina
Ry Andriamanitra malala ô, henoy ny fitarainako rehefa manatona an-kerim-po eo alohan'ny seza fiandriananao aho satria fantatro fa Andriamanitra Tsitoha ianao izay naniraka ny zanakao tokanana ho faty noho ny fahotako ary misaotra anao mandrakizay aho ary hanaja ny anaranao satria Tompon'ny maro ianao. Mandohalika eo anatrehanao aho mba handrenesanao ny fitarainako…
naamala lucy 25 aogositra 2020 Amin'ny 9:26 hariva
Andriamanitra malala..Manakaiky ahy tahaka ny fahotana aho. Mangataka ny famindram-ponao sy ny fahasoavanao .nantomboka tamin'ny fidiranao an-tsokosoko teo amin'ny fitantanako.. Leo ny trosa aho, reraky ny fahantrana, mila mamerina ny harem-bolako ary manapotika izay fanekena izay nanakana ahy tsy hanana fanambinana ara-bola..izany fotoana mba hitrangako ambonin'ireo fahavaloko ary hitaky ny harenako ara-bola rehetra..Ny anaran'i Jesosy no azoko, fananako arivo heny… amin'ny alalàn'ny afo mahery .. ..Amen..satria vita izany
Festosy 25 aogositra 2020 Amin'ny 11:30 hariva
Lawrence 19 septambra 2020 amin'ny 12:58 maraina
Misaotra anao lehilahin'Andriamanitra, ary fanosorana bebe kokoa, Fahasoavana ho anao sy ny asa fanompoanao
David Lupenga 3 Oktobra 2020 Amin'ny 3:29 hariva
Hotahian'Andriamanitra be dia be ianao, lehilahin'Andriamanitra, ho voatahy, mino aho fa mandray amin'ny fahasoavana amin'ny finoana an'i Jesosy, ilay anarana mahery hoe Nazareta.
chinedum nzerem Oktobra 6, 2020 Ao amin'ny 8: 37 am
Mahazo fandrosoana ara-bola amin'ny JESOA NAME aho
Uche kester Oktobra 11, 2020 Ao amin'ny 1: 39 am
Mino ny herin'ilay Andriamanitra avo indrindra aho ary izao dia rehefa nivavaka aho dia novaliany aho, misaotra anao Jesosy
Bisola Lazarus Oktobra 28, 2020 Ao amin'ny 3: 57 am
Andriamanitra Tsitoha mankasitraka anao aho satria efa novalianao ny vavaka nataoko ary fantatro fa ho tsara amin'ny zava-drehetra amin'ny fiainako ara-bola amin'ny anarana mahery an'i Jesosy Kristy ny zavatra rehetra
EnVic Oktobra 31, 2020 Ao amin'ny 3: 50 am
Tari-dalana manampy amin'ny vavaka ara-bola mahomby. Misaotra nizara ny fanambarana nataonao
Catherine ogbeni 28 Febroary 2021 Amin'ny 10:17 alina
Ity dia santionany mahafinaritra. Saingy nisy hoodlum cyber sasany nametaka dokambarotra vetaveta tao.
Maniry fa azo esorina tompoko
Naluyima Sumayia 18 martsa 2021 Amin'ny 9:51 hariva
chibueze evarlistus ogbonnaya 17 aprily 2021 Amin'ny 6:04 maraina
Alohan'ny faran'ity volana aprily ity dia ankafiziko ara-bola miaraka amin'ny # 20,000 amin'ny anaran'i Jesosy Amen
declan anosike 8 Mey 2021 Amin'ny 12:19 maraina
Mila fivoarana ara-bola matotra aho,
Godfrey 17 Mey 2021 Amin'ny 6:00 maraina
matoky an 'Andriamanitra amin'ny famonjena, asa fahagagana, fahasalamana ary fitantanam-bola
Oluwole abayomi stephen 17 Mey 2021 Amin'ny 7:45 hariva
Manome voninahitra an 'ANDRIAMANITRA aho. Teboka vavaka tena manampy
NILDA LUCIA IBARRA 30 jona 2021 Amin'ny 9:24 hariva
Munawar James 15 septambra 2021 amin'ny 11:50 maraina
Ny maikaTadidio azafady ny fianakaviako amin'ny vavaka ataonao isan'andro:
Andro tsara ho anao rehetra, manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy aho: Munawar James no anarako ary fianakaviana kristiana aho ary avy any Pakistan aho, azafady mba ataovy ny vavaka ho an'ny fahantrana sy ny toe-javatra ratsy eo amin'ny fianakaviako, mba hanaovan'i Jesosy Kristy zavatra lehibe Ny fahagagana ho ahy anio sy ny fatoran'ny fahantrana dia miala amin'ny fianakaviako, satria noho ny fahantrana sy ny krizy ara-bola ratsy dia mahatsapa henatra tokoa izahay eto amin'ny faritra misy anay, noho ny virus corona very asa aho ary tsy manana asa, tsy manam-bola ary tsy misy loharanom-bola. Azafady ho an'Andriamanitra dia manaova vavaka fahagagana ho ahy sy ny fianakaviako.
Misaotra anao. Tahin'Andriamanitra daholo ianareo
Ary raha misy zanakalahy / zanakavavin'Andriamanitra maniry hanampy antsika, dia andefaso ny fanomezam-pitiavanao ho anay ary azafady mifandraisa amiko amin'ity adiresy mailaka ity:
(Ao amin'i Jesosy Kristy rahalahinao)
Vavaka 50 mahery amin'ny fanjakan'ny haizina